Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ ထုတ်လုပ်သူနှင့် တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ dodavatel, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ vývozci, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ vývozce, Taiwan တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ továrna, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ výrobci, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ Dodavatelé, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ výrobce, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ OEM, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ továrny, တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ výrobci
တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
ဤသည်မိုဃ်းကိုရွာစေ poncho အကြမ်းခံများနှင့်ထူ PE ရေစိုခံပစ္စည်းနှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည်.ဒါဟာခြောက်သွေ့အဆင်ပြေအသုံးပြုသူစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့ဝတ်ထားအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း,ထိုသို့သငျသညျပူသို့မဟုတ်စေးကပ်ခံစားရစေမည်မဟုတ်
ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းဧရိယာတဝိုက်ရေကာကွယ်မှုအားဖြည့်ဖို့ elastic cuff နှင့် drawstring ပါးပျဉ်း.
ဤရွေ့ကားမိုးရွာရွာ ponchos ထိုကဲ့သို့သောခရီးသွားလာအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများထွက်သည်ဦးတည်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာပစ်ချနိုင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိတ်ထုပ်တစ်ဦးချင်းလာ,တောင်တက်,စက်ဘီးစီးခြင်း,စခန်းချနေထိုင်မည့်နှင့်ပိုပြီး!
တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစားအားလုံးကိုက်ညီ:က'အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်လူငယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီးပြည့်စုံသော poncho SA,အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနည်းလမ်း:30 ရက်%အပျငှေ,ဝယ်လက် L ကိုထုတ်ပေးသင့်တယ်/အဖြစ်မကြာမီ B ကအဖြစ်ကို C/L ကိုထုတ်လုပ်သူကကမ်းလှမ်းနေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/disposable-raincoat.html
တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ တစ်ခါသုံးမိုးကာအင်္ကျီ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ